ကျွန်တော်တို့သည် ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းများလာသည့် ဤကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ လောကီရေးရာကမ္ဘာ တန်ဖိုးများပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျိုးကြည့်ခြင်းလဲ ကြီးထွားလာသည်။ ယနေ့သခင်ယေရှု ပြန်လာလျင် ယုံကြည်သူဘယ်လောက်များတွေ့နိုင်မည်နည်း? သင်သည်သူတို့အထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်မည်လား?
သမ္မာကျမ်းစာက အလွန်ရှင်းပါသည်၊ ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများကိုရှာသည်။ ရာဇ၀င်ချုပ် ဒုတိယစောင် ၁၆း၉ တွင် “ထာဝရဘုရားသည် စုံလင်သောစေတနာစိတ်ရှိသော သူတို့ဘက်၌၊ ခိုင်ခံ့စွာနေခြင်းငှါ၊ မြေကြီးတပြင်လုံးကို အနှံ့အပြား ကြည့်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏။ ဤအမှု၌မင်းကြီးသည် မိုက်စွာပြုပြီ။ ယခုမှစ၍ စစ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟု ဆို၏။”
ဘုရားသခင်က ယုံကြည်သူများကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးရန် ရှာဖွေနေသည်။ သူ၏ချစ်ခြင်းကို သူ၏ကြီးမား သောတန်ခိုးအာဏာကိုဖြတ်၍ပြလိုသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှု ရှိခြင်းသည်၊ အသက်တာတွင် ဘုရားသခင် ၏ကောင်းကြီးများရရှိရန်၊ လမ်းဖွင့်ပေးသည့်၊ သော့ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုက “ထိုအခါ သူတို့၏မျက်စိကို တို့တော်မူ၍၊ သင်တို့ယုံ ကြည်ခြင်းရှိသည်အတိုင်း သင်တို့၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူလျှင်၊” (မ ၉း၂၉)။ ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို သင်၏အသက်တာရှိ အကျယ်အ၀န်းပမာဏအတိုင်း သွမ်းလောင်းပေးလိုသည်၊---သင်၏မိသားစု၊ သက်မွေးမှုလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆက်ဆံရေး-- သင်၏ယုံကြည်ခြင်း အဆင့်နှင့်အညီ၊ ဘုရားသခင်ကဆောင်ရွက်ပေးမည်။ သင်၏ ယုံကြည်မှုသည်ကြီးမားလျှင်၊ သင်သည်ကြီးမားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမည်။ သင်၏ယုံကြည်မှုသည် အနည်းငယ်ဖြစ်လျှင်၊ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအနည်းငယ်သာရမည်။ သင်သည်ယုံကြည်မှုမရှိပါက သင်၏အသက်တာ တွင်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရပါ။
၀မ်းနည်းဖွယ်ရာမှာ၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး သစ္စာရှိသော၊ ဘုရားသခင်နှင့်အချိန်ပြည့်ဆက်သွယ်မှုရှိသူ များကို ရှာရတာခက်ခဲသည်။ ကျမ်းစာကပြောသည်၊ “လူများ တို့သည် မိမိတို့ပြုသော ကျေးဇူးကို ကြားပြောတတ်၏၊၊ သစ္စာရှိသော သူကိုကား၊ အဘယ်သူ ရှာ၍ တွေ့နိုင်သနည်း” (သု ၂၀း၆)
ဆာလဲ ၅၃း၂-၃ က “နားလည်သောသူ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူတစုံတယောက်ရှိသည် မရှိသည်ကို သိမြင်ခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ပေါ်က လူသားတို့ကို ငုံ့၍ကြည့်ရှုတော်မူ၍၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဆုတ်သွားကြပြီ၊၊ တညီတညွတ်တည်းဆွေးမြေ့ယိုယွင်းခြင်း ရှိကြ၏၊၊ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သော သူမရှိ၊၊ တယောက်မျှမရှိ၊၊”
အာဒံ နှင့် ဧ၀ ၏အပြစ်သည် ကမ္ဘာကြီးသို့ဝင်ရောက်လာသည်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အကျင့် ပျက်ကြရသည်။ တစ်ယောက်မှ အချိန်ပြည့် မှန်တာကို မလုပ်ကြပါ၊ ဒါပေမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်း ၏သော့ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်း ကြီးမားလျှင်၊ အသက်တာတွင် အောင်မြင်ခြင်း ပိုမိုရရှိ၍အတွေ့အကြုံရရှိမည်။
“ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သောသူမည်သည်ကား၊ လောကကို အောင်တတ်၏။ လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကား၊ ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပေတည်း။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်သည်ကို ယုံကြည်သောသူမှ တပါး၊ အဘယ်သူသည်လောကကို အောင်နိုင်သနည်း။”(၁ယော ၅း၎-၅)
Daily Hope The Value of Faith inaFaithless World August 9, 2011 by Rick Warren ” ကို ဆီလျှော်အောင်ဘာသာပြန်သည်။